धरानको उल्लामय य:मरि सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव सम्पन्न ! - Subhay Postधरानको उल्लामय य:मरि सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव सम्पन्न ! - Subhay Post
धरानको उल्लामय य:मरि सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव सम्पन्न !
सुभाय् संवाददाताDecember 29, 2019 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
धरान/ धरानमा आयोजित यःमरी तथा सांस्कृतिक पर्यटन उत्सव २०७६ सम्पन्न भएको छ ।
९ गतेदेखि ४ दिन चलेको महोत्सवको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईको प्रमुख अतिथ्यमा पुष १२ गते शनिबार समापन कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी विशेष अतिथि तथा विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू अतिथिको रुपमा सहभागी भएका थिए।
नेवार समुदायको विशेष परिकार य:मरि सहित विविध परिकार चाख्दै सकिएको उत्सव । नेवार समुदाय तथा गैर नेवार समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उत्सवमा यःमरी स्वादिलो मानी चाख्ने तथा फोटो खिच्नेको पनि भीड लागेको थियो ।
आयोजक संस्था नेवा: देय् दबू धरानका अध्यक्ष मनोहर शाक्यले धरानमा नेवार समुदायको विशेष परिकारको रुपमा चिनिएको यःमरीको स्वाद सबैले लिएको बताए ।
स्टलमा विभिन्न प्रकारका यःमरी राखिएको थियो ।
कार्यक्रम संयोजक शिला बज्राचार्य भनिन् “यो आठौं य:मरि महोत्सव हो । यसपटक आगन्तुक सबैले पनि यःमरी चाख्न पाएका छन् । कार्यक्रमका निम्ति नेवार समुदायका महिला, पुरुषलाई तालिम नै दिएर तयार पारेका थियौं । ”
“य:मरि महोत्सव”लाई टुबोर्ग बियरले प्रायोजन गरेको थियो भने बराह ग्रुपले सह-प्रायोजकको रुपमा सहयोग गरेको थियो ।
चार दिनसम्म संचालन भएको उत्सवमा उल्लेख्य संख्यामा सहभागिता रहेको कुरा आयोजकले बताएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुरयाउने उद्देश्यले पुस ९ देखि १२ गतेसम्म आयोजना भएको महोत्सवमा परंरागत चर्या नृत्य, नेवार सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुजातीय संस्कृतिक कार्यक्रम , राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुको प्रस्तुति आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो ।
नेवा: देय् दबू धरानको यस कार्यक्रम नेवा: पहिचान र संपदा संवर्द्धन र प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण पाइलाको रुपमा लिन सकिन्छ ।